Samsung "idozi" a ahụhụ ahụhụ na-arụ ọrụ kemgbe 2014 | Gam akporosis
A na-ekpughere anyị niile bụ ndị na-eji ama ama n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ na nsogbu nchekwa. Na Companieslọ ọrụ sọftụwia na-agbasi mbọ ike inye ahụmịhe echedoro n'iji ngwaọrụ ha. Mana n'ime akụkọ ntolite na-adịbeghị anya, egosila na nke a abụghị ikpe ya ruo ugbu a enweghi 100% enweghi ike imeri ngwaọrụ, taa anyị na-ekwu maka Samsung.
Companieslọ ọrụ buru ibu na-etinye nnukwu akụkụ nke ego ha na nchekwa. adị ụlọ ọrụ mpụga ndị na-ahụ maka igosipụta adịghị ike iji nweta ego buru ibu. Egwuregwu, ngwa ọdịnala, sistemụ arụmọrụ… Onweghi onye a gụpụrụ inwe a nsogbu nke na-enye ohere ịnweta ngwaọrụ anyị n'ụzọ iwu na-akwadoghị.
1 Nwere ike melite na-edozi ahụhụ afọ isii
2 Ebee ka Samsung nche bug?
Nwere ike melite na-edozi ahụhụ afọ isii
Mmelite na ngwaọrụ anyị adịla mkpa. N'otu aka, sistemụ arụmọrụ na-agbanwe ma na-agbanwe iji nweta arụmọrụ ka mma. Ha nwere ike inweta nke ahụ anyị smartphones-agba ọsọ ọzọ ọmụmụ, ụfọdụ ngwanrọ ntọala ma ọ bụ ọbụna obere oriri ike. Ma olee ebe ha na-enwetakwa nke kachasị mkpa bụ na ngalaba nchekwa.
Site Google ha achọpụtawo a nche oghom na mere vulnerability na Samsung ngwaọrụ site na 2014. Na ekele maka mmelite nke na-adịbeghị anya May, a edozila ahụhụ a dị mkpa. Ka ọ were ma ọ bụrụ na ị na-emelite gị Samsung ma, ọ bụ oge na-aga ime ya nke mere na ngwaọrụ gị dị nchebe na nzuzo gị agaghị ekpughe.
Ebee ka Samsung nche bug?
Nsogbu nchebe mere iji nwa afọ Samsung ngwa izipu ozi MMS n'ụdị oyiyi. Ndị a Qmage faịlụ ha nwere ike uzo Android address ohere layout randomization nchebe. N'ụzọ dị otú a, ha nwere ike iru igbu koodu ọjọọ na / ma ọ bụ nweta faịlụ na data nke ngwaọrụ n'onwe ya.
Ọrụ nke Samsung maka gịnị ngwaọrụ gị ga-edozi ihe oyiyi ahụ n'ụzọ nke ahaziri iche na usoro Qmage abụrụla '' ọnụ ụzọ '' maka nnweta iwu na-akwadoghị. Ọrụ Google dị oke mkpa ka e wee nwee ike ịchọpụta ọdịda a. O sina dị, enwere ike ị nweta site na nchekwa nchekwa a abụghị ihe ozugbo. Ebe ọ bụ na mgbakwunye na ịchọrọ ruru 300 MMS, ma nwee ike ibu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa 2 nweta ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung "edozi" nsogbu ahụhụ na-arụ ọrụ kemgbe 2014
Edepụtara Redmi 10X na Google Play Console